हिन्दी फिल्मसँग किन डराएन 'मेरो भ्यालेन्टाइन' ? – Namaste Filmy
हिन्दी फिल्मसँग किन डराएन 'मेरो भ्यालेन्टाइन' ?
[dropcap]यो[/dropcap] बर्ष साउन महिनाको दुई सातासम्म नेपाली फिल्म रिलिज हुन सकेनन । सलमान खानको ‘किक’सँग भीडेको भोजपुरीबाट नेपालीमा डबिङ गरिएको विराज भट्ट अभिनित ‘ज्वाला’ले पनि पानी समेत भन्न पाएन । तर ‘किक’ ले भने नेपाली बजारबाट ३ करोड उठाउने सम्भावना देखाइसकेको छ ।
यसरी ‘किक’ले अक्रामक ब्यापार गर्ने अनुमान पहिले नै गरिएको थियो त्यसैले नेपाली फिल्म निर्माताहरु बाठा भए र आफ्ना फिल्म रिलिज गरेनन । त्यस्तै ‘किक’को नसेलाएको ब्यापार र अर्को शुक्रबार अक्षय कुमार स्टारर ‘इटस इन्टरटेन्टमेन्ट’ आउने भएपछि यो शुक्रबार नेपाली फिल्म चलाउन निर्माताहरु डराए । त्यसैले रिलिज पक्का गरेको ‘पुन्टे परेड’ पनि पछि सारियो ।
तर फिल्म ‘मेरो भ्यालेन्टाइन’ भने यसै शुक्रबार बाट सोलो रिलिज हुदैछ । बिस्तारै सेलाउदै गएको ‘किक’ले आफ्नो फिल्मलाई असर नगर्ने ‘मेरो भ्यालेन्टाइन’ निर्माता शुशिल श्रेष्ठको ठम्याई छ । त्यस्तै अर्को शुक्रबार रिलिज हुने ‘इटस इन्टरटेन्टमेन्ट’ ले पनि आफ्नो फिल्मलाई घाटा नपार्ने उनको भनाई छ । आफ्नो फिल्मको कथा, प्रस्तुती र विषयबस्तु नै उत्कृष्ट भएकोले अरु डराएको मितिमा पनि आफु नडराएको शुशिलले बताए ।
हाल ब्यापक पब्लिसिटीमा रहेको फिल्ममा निशा अधिकारी, बाबु बोगटी, स्वतन्त्रप्रताप शाह र सुस्मिता ढकालको अनस्किृन रोमान्स छ । अब्बल निर्देशक सुरज सुब्बा नाल्बोले फिल्मको निर्देशन गरेका हुन । फिल्मले प्रेम, रोमान्स, बिश्वास र धोकाको कथा बोकेको छ ।
कतार कन्सर्टका आयोजकप्रति शिव परियार आक्रोशित ।
आदिवासी चलचित्र महासंघको अध्यक्षमा अमृत ।